Kukwanisa kubudisa, kugadzira uye kugadzira zvakawanda zve 2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane (1408075-00-2) nehutano hwehutsika pasi peCGMP
SKU: 1408075-00-2 Category: Spiro compounds
Yakadzidzwa kugadzirwa nekushandurwa kweanvelp azaspirocycle kana azetidine yakashandiswa 4-anilinoquinazoline zvigadzirwa. IEGFR inhibitory mabasa uye in vitro antitumor potency yezvikamu izvi zvitsva zvakagadziriswa zvinopikisana nekenza yemasefu emapapu maviri HCC827 uye A549 vakaongororwa. Tsvaga kuti dzakawanda zvezvinangwa zvinowanikwa zvakanaka zvine simba rekudzivirira. Kunyanya, makemikari 21g ne 2-oxa-6-azaspiro [3.4] octane akatsiva akawanikwa aine mabasa eEFFR anoremekedzwa uye zvakadai sean antitumor potency kuenzanisa nemutungamiri gefitinib inotungamira nehuwandu hwekugadzirisa mvura.
Mukuwedzera, piperazine uye morpholine zvinowanzoshandiswa mumadhiragi. Kugadzirwa uye kuwirirana kwezvinyorwa zvavo zvinogona kubatsira kubvunzurudza makemikari mune mishonga yemishonga. Kuburikidza ne [3 + 2] cycloaddition, yakagadziridzwa kuwedzera kwe6-benzyl-2,6-diazaspiro [3.4] octane oxalate uye 2-oxa-6-azaspiro [3.4] octane sevanotsiva piperazine uye morpholine zvakapiwa, maererano. Multi-gram yakawanda yemakemikari inogona kuwanika nyore nyore muzvibereko zvakanyanya.
MDL Nhamba MFCD22123302
Kemikari Zita kana Nyaya 2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane
2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane (1408075-00-2) Kuchengetedza nekubata
2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane Tsanangudzo yenjodzi:
w Inokonzera kushungurudza kweganda [Yambiro Ganda kurwisa / kutsamwa]
w Inokonzera kushungurudzwa kweziso zvakanyanya [Warning Serious eye damage / eye irritation]
w Kungakonzera kushungurudzika kwekuputira [Manyevero Anonyanya kutsvaga chinhengo chekutyisa, kusarudzwa kumwe chete; Kufuridzirwa kweropa rinotsamwisa]
(1408075-00-2) Precautionary statement:
w Geza ... kunyanya mushure mekubata.
w Kushandisa kunze kunze kana mune nzvimbo yakanaka.
w IFI PAKUTANGA: Shamba nemvura yakawanda.
w KANA UCHISHA: Bvisa munhu kumhepo itsva uye ugare wakasununguka kufema.
w KANA MUMWE EYES: Isai nokungwarira nemvura kwemaminitsi akawanda. Bvisa manotsi emapurisa kana aripo uye ari nyore kuita - ramba uchigunzva.
w Danai CENTER POISON kana chiremba / ... kana iwe uchinzwa usina kufara.
w Kunyatsorapwa (ona ... pane irirairi).
w Kana KUNYARA kushungurudza kunoitika: Wana mazano ekurapa / kutarisa.
b Bvisa nguvo dzakasvibiswa.
w Zvinyorwa zviri mukati / zvimedu kusvika ...
Synthesis of azaspiro [3.4] octanes ne [3 + 2] cycloadditionWang
Kuburikidza ne [3 + 2] cycloaddition, iyo yakagadziriswa ye6-benzyl-2,6-diazaspiro [3.4] octane oxalate uye 2-oxa-6-azaspiro [3.4] octane sevanotsiva piperazine uye morpholine yakapiwa ...
Chinese Journal ye Organic Chemistry 2015.
Heterocycles ane machina-ane-4-anilino-quinazoline yakagadzirwa se epidermal kukura factor receptor (EGFR) kinase inhibitors
Kunyanya, makemikari 21g ne 2-oxa-6-azaspiro [3.4] octane substituent yakawanikwa kuva neEGFR yepamusoro miitiro inhibitisa uye yakafanana neyenyeredzi yepamusoro inofananidzwa nemutsetse wegefitinib inotungamirira uye yakagadziriswa mvura inogadziriswa ...
Bioorganic uye Mishonga Chemistry Tsamba 2013.
2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane (1408075-00-2) Shanduro yeKambani:
2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane (1408075-00-2) Kurayira Kuwanda uye Mutengo:
2 anodzokorora nokuti 2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane (1408075-00-2)
Isu tinoshandisa mabhii kusvika kumahombekombe ekugadzira uye kuwirirana kwe2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane pakati pemamwe makemikari. Pa APICMO, mishonga yedu inoenderana ne CMGP mitemo yekutengesa.
Chimiro chimiro che 2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane (1408075-00-2)
2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane (1408075-00-2) Mhizha
Synonyms · Hemioxalate munyu
· 2-oxa-6-azaspiro [3.4] octane
· 2-oxa-7azaspiro [3.4] octane
Chimiro chemuviri Liquid
Monoisotopic mass (g / mol) 113.084
Molecular weight (g / mol 113.16
Molecular formula C6H11HERE
Pfungwa inoputika (˚C) 140-149
IUPAC zita 2-oxa-7-azaspiro [3.4] octane
Kuwanda kwevanhu (g / cm3) 1.08
Kemikari zita 2-oxa-7-azaspiro [3.4] octane
CAS no. 220290-68-6
Boiling Point (˚C) 187
2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane (1408075-00-2) Chimiro uye Zvisikwa zveMuviri.
Iko mvura yakasvibiswa uye isina kuchena yemavara.
Covalent Bond 1 unit
Hydrogen Bond Donor-1
Rotatable Bond 0 zvidzidzo
2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane yakasimbiswa pasi pekuchengetedzwa kwemamiriro ekuchengetedza. Kuparara hakuzokwanisi kuitika kana iko kushandiswa uye kuchengetwa maererano nezvakataurwa. Zvigadzirwa zvinosanganisa zvinosanganisira Carbon monoxide, carbon dioxide, uye Nitrogen Oxides.
2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane (1408075-00-2) yakaumbwa nezvinhu
Kusagadziriswa Bond Stereocenter Unit 0
Chigadzirwa Chine Chinyorwa chokwadi
Misa chaiye 113.084 g / mol
Monoisotopic Mass 113.084 g / mol
Topological Polar Surface Area 21.3A ^ 2
Molecular weight 113g / mol
2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane (1408075-00-2) anoshandisa
Iko kunobatanidzwa mukugadzirira kweza-spirocycle kana azetidine inoshandiswa 4-anilinoquinazoline zvigadzirwa, izvo zvinoratidzira epidermal kukura factor receptor (EGFR) zvinhu zvinodzivisa. Yakashandiswawo pakuvandudza kwesayenzi nekutsvakurudza.
Njodzi dzinosangana ne2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane.
Zvinogona kukonzera kusuruvara kweganda kana zvakanyatsobatana neganda.
Izvozvo zvinogona kukonzera kushungurudzika kwepumusoro kana kuvhara. Inogumbura chikamu chepamusoro chekupumha.
Inokonzera kushungurudzwa kweziso zvakanyanya.
Inogona kunge yakakuvadza nekuisa.
Icho chimoto chinopisa.
Kuchengetedzwa kunoitwa kana uchibata ne 2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane
1. Kudzivirirwa pachedu.
Dzivisa kusangana kweganda zvakananga nekupfekedza zvipfeko zvinokonzera makemikari. Dzivisa ziso rinotarisana zvakare uye udzike magasi ekudzivirira. Kupfeka zvakakodzera kufema chemishonga kana ukashandisa 2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane mune imwe nzvimbo isina kunaka. Iwe unorayirwa kuti ushandise magwaro ekudzivirira anotevera paunoshandisa kemikari:
Vapor breath (kana zvichidiwa).
2. 2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane yekugadzira engineering.
kana mhepo yakasvibirira isingakwanisi kudzora kuwanda kwemhepo mune imwe imba, unogona kushandisa kupera kwemahara mukati memunharaunda.
Shandisa zvisiri izvo zvinoita kuti utsi hwemhepo huvepo, hunobvumirwa kuputika-uchapupu hwemagetsi.
Iva nemeso ekudzivirira uye kuchengeteka mvura kana ukasangana kana kupwanya.
3. Matambudziko ekutanga.
Mukana wekusangana necheganda, nyatsoshamba nemvura yakawanda yemvura uye sipo yakanyorova. Iwe unogona kushandisa mvura inotonhora. Fukidza nzvimbo yakakanganiswa nemhepo. Tsvaga kurapwa. Shamba nguvo dzakasvibiswa usati washandisa zvakare.
Kana zvikapenya mumaziso ako, chimbidza kubvisa kusangana kwe lens kana ukapfeka chero. Uine maziso akazaruka, simbura meso nechitonho, mvura yakachena kwekanguva kwe15 maminitsi. Unogona kushandisa mvura inotonhora. Kana kupisa uye kubwinya kuchiripo, tsvaka rubatso rwechiremba.
Iwe haufaniri kukonzera kurutsa. Ipai mvura kumunhu anotambudzika kunwa. Bata chiremba.
Kuonekwa kune 2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane inogona kuvhiringidza nzira yepamusoro yokufema ine zviratidzo zvinenge zvichikwira, kunyunyuta uye kusuruvara. Tora munhu wacho kunze kana kune imwe nzvimbo nemhepo yakachena. Kana munhu akafuridzirwa achifema zvakaoma, itai oksijeni. Tsvaga kurapwa.
4. Paunoshandisa 2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane
Paunenge uchishandisa ita izvi zvinotevera:
Dzivisa kufema kupisa / mhepo / mhepo.
Mushure mekusangana neganda, gezai pakarepo.
Iva nechokwadi chekuti ventiyati yakakwana panguva yekushandiswa.
Kupfeka zvipfeko zvekudzivirira uye mabhoti asingagadziki.
Dzivisa kupfuurira kwenguva refu.
Shenjerera paunenge uchibata.
Usaisa guruva kana kupisa.
Kudya, kunwa kana kusvuta zvinorambidzwa uchishandisa chigadzirwa ichi.
Iva nekokuchengetedza mvura uye kushamba kweziso kuwanika.
5. Mushure mekushandisa 2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane
Bvisa zviri mukati kana zvigadzirwa nemitemo.
Ichengetedze zvakasimba chisimbiso.
6. Apo kunze kwekushandisa
Chengetedza munzvimbo dzakanyanyisa, dzakaoma.
Chengeta mumutumbi wepakutanga wekutakura kana chigadziko chakanyatsoratidzwa.
Ramba uri munzvimbo yakanaka.
7. 2.Oxa-6-azaspiro [3.4] octane kuchengetedza nekubata
Chengetedza munzvimbo yakaoma ine mhepo yakakwana, kutonhora kunodzorwa, kunze kwezuva.
Tevera mitemo yose inoshanda yehutano nekuchengeteka.
Gara kure nevashandi vasingabvumirwi.
Usazvichengetedza pedyo nekupisa kana zvitubu zvemoto.
Chichengetedze chakavharwa mumudziyo.
Gara kure nemakemikari asingawirirani, zvinopisa uye zvinopisa zvinopisa, kupisa, mazhenje akazaruka, nzvimbo dzakatsva kana oxidzing agents.
Chengetedza munzvimbo isina chiedza chairo.
Paunenge uchibata, zvakakosha kuti:
Dzivisa chero upi hwemhepo uye mhepo inopisa sezvinoita maruva, nzvimbo dzinopisa, uye kubuda kwechimiro.
Shanda muimba yakazaruka kana yakanaka.
Pfekai zvipfeko zvekudzivirira kuti urege kuderedza futi, kana kuti kuwana chimiro inosangana neganda kana maziso.
Shandisa maitiro ekudzivirira maitiro asingasviki, anobvumirwa nekuputika-uchapupu uye zvinhu zvakachengeteka magetsi.
Dzivisa kuumbwa kweaerosols.
Shanda muimba inopisa.
8. 2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane Mikana Dzakanganisa.
Izvo zvinokonzera kudzima zvinosanganisira: Carbon dioxide, kupisa poda uye mvura spray. Kana iwe uchirwisana nemoto mukuru, shandisa mvura spray kana doro risingadziviriki. Mazano kune vanoita moto:
Kupfeka mupfuri wemhepo.
Kupfeka chidziviriro chakakwana chisingaoneki.
Dzivisa kupinda musangano chero ipi zvayo yakanyanyisa. Iwe unogona kumira chero upi zvake uchidonha kana usina kukukuvadza iwe. Ivai nemafuta nemvura inosunga zvinhu (jecha, diatomite, sawdust). Dhipidhi iyo inoshandiswa inoshandiswa mumudziyo unonyatsodanwa wakagadzirira kurasa. Simba rinopera nzvimbo. Nokuda kwekupera kukuru kwausingazokwanise kuva nayo iwe unogona kuonana nemutengesi kana mabasa ekukurumidzira.
9. Kunzwa uye Reactivity.
2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane inogadzikana neine simba rinokonzera miviri, simba rakasimba, kuderedza vashandi uye zvigaro. Iyo inodonha pasi pekushisa kwakakwirira inobudisa Carbon monoxide, Carbon dioxide, uye Nitrogen Oxides.
Iwe unofanirwa kubata 2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane semarara chaiwo pasi pekuteerera mitemo yepamutemo. Naizvozvo, inofanira kutarisirwa, kutarisirwa uye kuraswa zvakanyatsonaka nenzira inopindirana nenharaunda, yehurumende kana yehurumende mitemo.
11. 2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane (1408075-00-2) Kutumira Info
2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane yakachengeteka kune imwe nzvimbo kana kutakurwa kwemhepo.
2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane inopindirana nemitemo yose yemunharaunda, yehurumende uye yenyika.
2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane (1408075-00-2) Kuronga kukuru uye mutengo.
Iwe unofarira zvishoma kana kutenga zviguru here? Taura nesu. Pa APICMO, tinokuvimbisai nezvehutano hunogutsa uye kukwikwidzana.
Ring Systems Handbook, Volume 1, American Chemical Society. Kemikari Abstracts Service, American Chemical Society, 2003, University of California peji 470-474
Kugadzirisa uye kugadzirwa kwezvinhu: -In Organic Chemistry Laboratory, Lutz F. Tietze, TheophilEicher, Ulf Diederichsen, Nina Schutzenmeister, Andreas Speicher, Page 258-270.
Intermediate Chemistry, Third Edition, Ann M. Fabirkiewicz, John C. Stowell, Peji 25-30
Yakanakisisa 2-Oxa-6-azaspiro [3.4] octane nebasa randakave narina, Nice experience